သင့်ရဲ့ကွန်ပျူတာကိုရန်သင့်ဖုန်းသို့မဟုတ် TABLET ကိုချိတ်ဆက်ဖို့ကိုဘယ်လို - ဖုန်းကို - 2019
ယနေ့အဖြစ်, သင် VKontakte အပါအဝင်လူမှုရေးကွန်ယက်များ, အတွက်ကြော်ငြာနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်အကောင်အထည်ဖော်လျက်ရှိသည်ကိုဘယ်လိုဖွင့်, ဤဆောင်းပါးတွင်ဆွေးနွေးလိမ့်မည်။
Method ကို 1: သင့်ရဲ့စာမျက်နှာပေါ်တွင် Post ကို
ဤနည်းလမ်းကိုအခမဲ့နှင့်ဤလူမှုရေးကွန်ယက်တွင်မိတ်ဆွေတွေအများကြီးရှိသည်သောသူတို့အဘို့သင့်လျော်သည်။ ဤကဲ့သို့သော post ကိုထားရှိ:
သင့်ရဲ့ page ကို VC ကိုသွားပြီးတိုင်ဖြည့်စွက်အဘို့အပြတင်းပေါက်ရှာပါ။
အဲဒီမှာကြော်ငြာရေးသားခြင်း။ လိုအပ်ခဲ့လျှင်, ရုပ်ပုံများနှင့်ဗီဒီယိုသက်ဆိုင်ပါသည်။
အခုတော့သူတို့ရဲ့သတင်းအပိုင်းများတွင်သင်၏အဆွေခင်ပွန်းအပေါင်းတို့နှင့်နောက်လိုက်ပေမယ့်ကြော်ငြာအကြောင်းအရာအတူပုံမှန် post ကိုမြင်ရပါလိမ့်မည်။
Method ကို 2: Group မှကြော်ငြာ
သင် VC ကိုများအတွက်ရှာဖွေရေးအတွက်ကိုတွေ့လိမ့်မည်သည့်အကြောင်းအရာအလိုက်အုပ်စုများအတွက်သင့်ရဲ့ကြော်ငြာ post ကိုပူဇော်နိုင်ပါတယ်။
Read more: အုပ်စုတစ်စု VKontakte ကိုရှာဖွေဖို့ကိုဘယ်လို
ဟုတ်ပါတယ်, ထိုကဲ့သို့သောကြော်ငြာများအတွက်ပေးဆပ်ရန်ရှိသည်လိမ့်မယ်, ဒါပေမဲ့ရပ်ရွာကလူတွေအများကြီးလုပ်ပြီးထိရောက်သောလျှင်။ မကြာခဏများစွာသောအုပ်စုများအတွက်ကြော်ငြာစျေးနှုန်းတွေနဲ့ဆောင်ပုဒ်ရှိပါတယ်။ ထို့နောက်သင်တို့ရှိသမျှပေးဆပ်ကြောင့်သင့်ရဲ့ post ကိုထုတ်ဝေခြင်း, စီမံခန့်ခွဲသူမှချိတ်ဆက်ပါ။
Method ကို 3: ဖြန့်ဖြူးခြင်းနှင့် spam များကို
ဒါကအခမဲ့နည်းလမ်းများကိုနောက်ထပ်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ သငျသညျကလူဖို့အာရုံစိုက်အုပ်စုများသို့မဟုတ်ပေးပို့ခြင်းမက်ဆေ့ခ်ျအတွက်မှတ်ချက်များအတွက်ကြော်ငြာများဖြန့်ဝေနိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာအထူးလှေမဟုတ်, သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးစာမျက်နှာသုံးစွဲဖို့ သာ. ကောင်း၏။
ကိုလည်းကြည့်ပါ: တစ် bot VKontakte ဖန်တီးနည်း
Method ကို 4: ပစ်မှတ်ထားကြော်ငြာ
လျာထားသောကြော်ငြာခြင်းအတွက်ကယ် menu ကိုအောက်မှာဒါမှမဟုတ်သတင်းထဲတွင်နေရာပါလိမ့်မည်သည့်ကြော်ငြာအတိုဖြစ်ပါတယ်။ သင်အလိုရှိသောပစ်မှတ်ပရိသတ်အတွက်လိုအပ်ပါတယ်အဖြစ်ဤကြော်ငြာကိုသင် configure ။ အောက်မှာဖေါ်ပြတဲ့အတိုင်းဤအမှုကိုပြုသောသည်:
link ကိုစာမကျြနှာကလစ်၎င်း၏အောက်ခြေတွင် "ကြော်ငြာ".
လာမယ့်စာမျက်နှာတွင်, select လုပ်ပါ "Target ကြော်ငြာ".
ကျနော်တို့ page ကိုဖြုန်းနဲ့အချက်အလက်တွေအားလုံးကိုလေ့လာတယျ။
ကလစ်နှိပ် Now ကို "ကြော်ငြာ Create".
မဟုတ်ရင်ကြော်ငြာအကောင့်စနစ်တကျမလုပ်ဆောင်နိုင်ပါ, AdBlock ကို turn off ရန်သေချာစေပါ။
ယင်းနောက်စာရင်းထဲကလိုချင်သောအုပ်စုတစ်စုကိုရွေးပါသို့မဟုတ်ကိုယ်တိုင်သူမရဲ့နာမည်ကို inscribe ။ စာနယ်ဇင်းများ "Continue".
အခုဆိုရင်သင်ကြော်ငြာကိုယ်တိုင်ကဖန်တီးရမည်ဖြစ်သည်။ အဆိုပါခေါင်းစဉ်စာသားနဲ့သင်ကကြိုတင်ပြင်ဆင်ကြပြီပုံ, အများစုမှာဖွယ်ရှိ။ ဒါဟာလယ်ကိုဖြည့်စွက်ရန်ကျန်ရှိနေဆဲဖြစ်သည်။
အများဆုံးအစာကျွေးခြင်းအရွယ်အစား image ကိုကြော်ငြာပုံစံပေါ်တွင်မူတည်သည်။ သငျသညျကို select ပါလျှင် "ပုံရိပ်နှင့်စာသား"ထို့နောက် 145 မှ 85 နှင့်ဆိုပါက "Big ရုပ်ပုံလွှာ"ထိုအခါစာသားထည့်လို့မရပါ, ဒါပေမယ့်ပုံရိပ်တွေအများဆုံးအရွယ်အစား - 145 165 ။
ကျနော်တို့အခုအပိုင်းဖြည့်စွက်ရမည်ဖြစ်သည် "ပစ်မှတ်ပရိသတ်ကိုချိန်ညှိခြင်း"။ ဒါဟာတော်တော်လေးကြီးမားတဲ့ပါပဲ။ ကအပိုင်းအစတို့ကအပိုင်းအစကိုစဉ်းစားပါ:
ပထဝီဝင်။ ဒီနေရာမှာတကယ်တော့, သင်တို့သည်ဤမျှပေါ်တွင်သင်၏ကြော်ငြာတွေဖော်ပြရန်တစ်တိုင်းပြည်သည်, လူတွေ, မြို့, မည်သူကိုရွေးချယ်ပါ။
အသက်အပိုင်းအခြား။ ထို့နောက်ကြမ်းပြင်ကိုရှေးခယျြ, အသက်, အိမ်ထောင်ရေးအခြေအနေ, နှင့်တူ၏။
ပညာရေးနှင့်အလုပ်။ ဒီနေရာတွင်ကကြော်ငြာတွေကိုပြသပါလိမ့်မယ်သူတို့တွင်ဖြစ်, သို့မဟုတ်အလုပ်နှင့်အနေအထားကိုဘယ်လိုသငျ့သညျပညာရေး၏အဘယ်အရာကိုမျိုးကိုညွှန်ပြနေသည်။
အပိုဆောင်းရွေးချယ်စရာ။ ဒီနေရာတွင်ကြော်ငြာကိုပြသပါလိမ့်မယ်အရာပေါ်ကိရိယာကို browser တိုင်အောင်, operating system ကိုရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။
နောက်ဆုံးဇာတ်စင်အပြင်အဆင်များ - ဆွဲဆောင်မှုသို့မဟုတ်စကားဝိုင်းများအတွက်စျေးနှုန်းတည် ထား. , ကြော်ငြာကုမ္ပဏီ၏ရွေးချယ်ရေးရန်။
left click နှိပ်လိုက်ပါ "ကြော်ငြာ Create" နှင့်အရာအားလုံး။
သင့်ရဲ့ဘတ်ဂျက်တွင်ပြသကြော်ငြာကိုစတင်ရန်နိုင်ရန်အတွက်ရန်ပုံငွေများဖြစ်သင့်သည်။ က replenish ရန်:
လက်ဝဲပေါ်မှ Sidebar မှာရှေးခယျြ "ဘတ်ဂျက်".
သင်တစ်ဦးဥပဒေရေးရာ entity မဟုတ်ပါကသာဘဏ်ကတ်များ, ငွေပေးချေမှုစနစ်များနှင့်ဆိပ်ကမ်းများမှတဆင့်ပိုက်ဆံဂုဏျတငျနိုငျသညျ။
ကြော်ငြာ VKontakte Add အနည်းငယ်ကလစ်အတွက်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်, သင်ဖြုန်းငွေကိုမလိုအပ်ပါဘူး။ သို့သော်ထိရောက်မှုနေဆဲကြော်ငြာပေးဆောင်ပါလိမ့်မည်, သင်မူကားကိုရွေးချယ်ပါ။